Wargeyska BILD oo shaaciyay kooxda hoggaanka u heysa loollanka loogu jiro saxiixa Erling Haaland – Gool FM
(Dortmund) 25 Agoosto 2021. Qandaraaska weeraryahanka kooxda Borussia Dortmund ee Erling Haaland ayaa lagu jebin karaa 64 milyan oo gini marka la gaaro bisha January ee sanadka 2022, waxaana arrintaas ay soo jeedisay dareenka kooxaha xiiseynaya laacibkan kuwaasoo boorsooyinkooda soo buuxinaya suuqa jiilaalka ee soo aaddan.
Kooxda kubadda cagta Chelsea ayaa xagaagan isku dayday lasoo saxiixashada Haaland iyadoo Dortmund hor dhigtay dalab isugu jiray lacag kaash ah iyo hal ciyaaryaha inkastoo kooxda Jarmalka ka dhisan ay iska diidday yaboohaas.
Si kastaba ha ahaatee, haatan wargeyska BILD ayaa warinaya inay Manchester United u cadcaddahay soo qaadashada laacibka reer Norway iyadoo lagu soo warramayo inay kooxda Macallin Ole Gunnar Solskjaer diyaar la tahay inay bixiso qiimaha lagu jebin karo qandaraaska laacibkan oo ah 64 milyan oo gini iyadoo heshiiska shaqsiga ahna la kaashaneysa wakiilkiisa Mino Raiola oo ay wada shaqeyn badan hore u dhex martay.
21-sano jirkan ayaa BVB u saftay 63 gool isagoo dhaliyay 62 gool tan iyo markii uu kaga yimid kooxda RB Salzburg isagoo kula guuleystay German Cup xilli ciyaareedkii tagay, waxaana ugaarsi ugu jiray xagaagii lasoo dhaafay kooxaha Chelsea, Manchester City, Real Madrid iyo Barcelona.
Kooxda Arsenal oo iska iibinaysa todobo ciyaaryahan maalmaha yar ee ka haray suuqa kala iibsiga xiddigaha